Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ရောက်ခဲ့သော မြို့တော်
၁ ကွ.... ဟားဟားးးးးး
မ နော်က ပန်းဝတ်ရည်ကို သောက်လို့ နေကောင်းသွားတယ် ဆိုပါလားးး
ဒီ၁ခါပဲ ၁ ရဖူးသေးတယ်..
မအိပ်သေးဘဲ စောင့်နေရတာနော် ကိုကြီးစိန်... မန့်မလို့ကို...
ဟွင်း ဟွင်း ဟွင်း..။။။
ဒါနဲ့ အပေါ်မှာကျ အရောင်တွေ ထည့်ထားပြီး အောက်မှာကျ မပါတော့ပါလား ကိုကြီးစိန်ရဲ့...
ကိုယ်ချည်းပဲ ဖြစ်နေပါလား တော်ပီ တော်ပီ ရပ်မှ...
ခွဲရေးထားလို့ နာမည်ကို လေးခေါက်တိတိရှာလိုက်ရတယ် :P
ပညာရှင်မို့ လေးစားပါတယ် :)
စိန် စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ် ကျန်းမာခြင်းတွေ နဲ့ ဒီမြို့လေးမှာ ပျော်ရွှင်စေချင်တယ်....
မောင်နှမတွေ အားလုံးရဲ့ နာမည်ကို စာတစ်ပုဒ်...စီပီး (ခေါင်း အသည်းအသန် ကိုက်နေတဲ့ကြားက) ဇာတ်လမ်းလုပ်ရေးနိုင်တဲ့ မျောက်ငိုကို တကယ် ချီးကျူးပါတယ်....
မောင်နှမတွေအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီး ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊ မောင်နှမတွေ စုံမှ နေပျော်တဲ့ မျောက်ဖိုးစိန်ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ် အမှတ်တရလေးမှာ...
မိုးကုတ်သားက ထိပ်ဆုံး ပါခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်...
အိပ်မက်လှလှ ဆီက အာဝါးတစ်သိန်း ငှားပီး ဆုချပါမယ်....
ချစ်ညီ မျောက်ငို .. ကို
စိန်စိန်ကတော့ အင်မတန် ဖွဲ့ တတ်တာပါလား
စိန်ဒိုင်းမွန်းလေးရောက်လာလို့ တစ်မြို့လုံး ဗြောင်းဆန်သွားတဲ့ အကြောင်း .. :P အဲလေ တစ်မြို့လုံး ပျော်သွားကြပါကြောင်း
14 January 2010 at 18:47
မြို့ကလေးမှာ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း နဲ့ ပြည့်စုံပြီး ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံး အကောင်အထည်ပေါ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ မောင်နှမတွေ အားလုံးနဲ့ အမြဲစည်းလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့.....
ကောင်းတယ်ဗျာ... အားလုံးပါတယ်... အရေးအသားကောင်း အတွေးခေါ်လဲစမ်းသစ်နေတာပဲ...
အဲမြို့လေးမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ ထာဝရနေသွားချင်ပါတယ်။
အေးချမ်းတဲ့ မောင်နှမတွေလို နေချင်မိတာ
တကယ်ကော ဖြစ်နိုင်ပါမလာလို့ တွေးလိုက်တိုင်း
ဘာပဲ ပြောပြော တွေ့ဖူးတဲ့ လူတွေကို
လှလှပပလေး ခုလိုရေးဖွဲ့ထားတာ တွေ့ရတော့လည်း
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ တကယ်ဖြစ်လာရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ သယ်ရင်းရာ။ ဟိုတယ် ကြီးကိုရည်ရွှယ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဒီနေ့ ခေါင်းကိုက်သက်သာရင်
တမာတော မှာ ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ စိန် ရေ စိန် ရေ တမာချဉ်ကို တို့မှာလား ပေါ်ပေါ်ချဉ်ကိုတို့မှာလား ကွဲကွဲပြားပြား ပြောပါစိန်ရေ။ ဇီးသီတော ရနံသစ်မှာ ပြည်ချစ်သား ကိုဖိုးစိန်ရေ။
ပင်ပန်းတယ်ဆိုလို့ ဘာလို့ပင်ပန်းတယ် ခုမှ သိတော့တယ် .. :D
ရောက်ခဲ့သောမြို့တော်ကနေ ကျွန်တော့ မြို့တော် ဖြစ်အောင် အမြန်ကြိုးစားပါ
ဒါနဲ့ ပေါက်ပေါက်က မေးနေတယ်
ဘယ်အချဉ်ကို တို့မှာလဲတဲ့ :D
အရေးအသားက မောင်နှမအားလုံးကို ပါအောင်ခေါ်သွားတာပဲ။
15 January 2010 at 02:41
ဒီမြို့လေးမှာ ဒီမောင်နှမတွေ နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ..အမြဲ နေရပါစေ....ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်...။
15 January 2010 at 04:17
အင်မတန်ခေါ်ရခက်တဲ့ မဂျူနာမည်ကိုရအောင်ထည့်ပြီးရေးထားတဲ့ တပည့်ကျော်ကြီးဖိုးစိန်ကို အင်မတိအင်မတန်လေးစားမိပါဒယ်...... အမ တကယ်ပျော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေပါ..... မုဆာခါများစားရရင်ပိုပျော်မလားဘဲ ဟားဟား...... အားလုံးကိုဓါတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်တိုင်း တစ်ယောက်တည်းပြုံးနေတတ်တယ်..... ပျော်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရလို့ နေမကောင်းတာတွေတောင်မေ့နေတယ် အဲဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ...............
My name is not there! so sad :(
Sorry!!!! I had seen it!!! :P
15 January 2010 at 05:31
ဆောင်းမှာ နှင်းတွေ ပက်ဖျန်းလို့ ရွက်တွေ
ကြွေကျ လေလွင့်နေတဲ့ အချိန်က
ဘယ်လောက်များ ကဗျာ ဆန်လိုက်သလဲ ....
သွေ့လော .. သွေ့လော ...
ူခုမှ သေချာစဉ်းစားမိတယ် ..
ကိုယ့် နာမည်ကိုယ် ..
အရမ်းကို နုရွ နေသလိုပဲ ....
ကိုယ့် စိတ်ကူးနဲ့အကြောင်းနဲ့ ပေးထားတာ ..!
အော် ဂလိုလား တတ်လဲ တတ်နိုင်ပေတယ် အဟားးးးး ဥာဏ်ကွန့်မြူးတာပေါ့လေး)
ပူးတေက ကင်းကောင်တွေနဲ့ ဘာတွေတုန်း
ဒီမြို့လေးမှာ မောင်နှမတွေနဲ့ အတူ ပျော်၂ရွှင်၂ နေနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
မိုးကုတ်မြို့မှာ သံလွင်မြစ်ကြီး ထူးဆန်းစွာနဲ့
သွားပါပြီ........ မောင်နှမအားလုံး အဆင်ပြေ
ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မတွေ စုံစုံလင်လင် ရှိတဲ့ မြို့လေးပါလား
နာတွ လူတွေကို ဒုက္ခမပေးပဲ အကြိုးပြုတဲ့ ပိုးဟပ်
ဆရာ ဆရာ ဆရာ လို့ သုံးခါ ခေါ်လိုက်တယ်.
ကိုယ့်ရဲ့မြို့တော် ဖြစ်အောင် မြန်မြန် လုပ်ပါ
မြို့လေးကို ဒီလိုပဲ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်နှစ်သက်ရာအရောင်တွေ ရေးရတော့တာပေါ့.....
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ထားစရာနေစရာ ရှာဖွေရတော့တာပေါ့..
ဒီလောက် ချစ်ခင်စည်းလုံး ဒီအထိစာနာနားလည်
16 January 2010 at 03:35
အဲဒီ့မြို့လေးမှာ ဆက်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်။
အကိုရေ အားကျစရာပဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ